ကူဝိတ်သို့ဗီဇာ | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူခရီးသွားပါ။
ကူဝိတ်မှဗီဇာ - ကျနော်တို့ကူဝိတ်မှကျွမ်းကျင်သူများအားမရကိုချစ် !. ကူဝိတ်အတွက်ဗီဇာနှင့်အလုပ်ရယူပါ။ သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အမြင့်မားလုပ်ခရှာနေလျှင်ဒီတော့, သင်သည်ဤတိုင်းပြည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးရရှိရန်တစ်လမ်းလည်းမရှိရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း, ကူဝိတ်အတွက်ဗီဇာ + အလုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့သင့်ရှာဖွေရေးမှအဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးတည်းသာအချိန်ပေးချေမှုဖြစ်ပါသည် မပါဘဲ ပေးဆောင်ခြင်း အစဉ်အဆက်ကိုထပ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကူဝိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အဗီဇာသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗီဇာရဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကအဲဒီမှာရွှေ့လျှင်သင်, ယူအေအီးအတွက်တခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည် ကာတာနိုင်ငံ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ။ တစ်ဦးအဆင့်မြှင့်အကောင့်နဲ့, သင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုစီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ကူဝိတ်ခြောက်လပြည်နယ်များတွင်ခွဲခြားထားပါသည်။ တဖန်သင်တို့ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသိသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါပြည်နယ်များတွင်နောက်ထပ်ဒေသများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အယ်လ် Asimah အဖြစ်, Hawalli, Farwaniya အတူတကွအတူမူဘာရက်အယ်လ် Kabeer, Ahmadi နှင့်သင်တန်း၏, ဂျရာ။
ကူဝိတ်အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏မြောက်ဘက်-အရှေ့ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။ အံ့သြဖွယ်ကူဝိတ်သာနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်ပြုလုပ်မြေဧရိယာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်။ ကူဝိတ်ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အလုပ်သမားများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ နှင့်သင်တန်း၏ပြားချပ်ချပ်, သဲအာရေဗျသဲကန္တာရကူဝိတ်အများစုဖုံးလွှမ်း။ ကူဝိတ်ယေဘုယျအား turist အတွက်လည်းစူပါနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စျေးဆိုင်များနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ကူဝိတ်ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏အစွန်အဖျားမှာအရှေ့အာရေဗျ၏မြောက်ပိုင်းအစွန်တွင်တည်ရှိသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ကူဝိတ်အီရတ်နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အတူနယ်စပ်ဝေမျှပေးသည်။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ဖို့သွားလာရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ထိုမှတပါး, ကူဝိတ် 5.5 သန်းလူဦးရေရှိပြီး: 1.6 သန်းကူဝိတ်နှင့် 3.2 သန်းဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားကနေပြည်တော်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်ပရှိလူဦးရေရဲ့ထက်ပို 75% နေရာယူထားသည်။ ဒါဟာကူဝိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရကျိုးနပ်ပါ!